China Na-ebuli ịwụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ịwụ na China na Shantui
Nzukọ dị mma na disassembly, agagharị dị elu nke mgbanwe, adaba na ngwa ngwa, yana ọrụ ọrụ zuru oke na-agbanwe.
1.Mgbakọ na-adabara adaba na mkpofu, mbugharị nke mgbanwe, dị mfe na ngwa ngwa, na mmegharị arụmọrụ saịtị zuru oke.
2. kọmpat na ezi uche Ọdịdị, elu modularity imewe;
3. Ọrụ ahụ doro anya ma arụmọrụ ahụ kwụsiri ike.
4.Less ala, arụpụtaghị ihe;
5.The eletriki usoro na gas usoro na-onwem na elu-ọgwụgwụ na elu pụrụ ịdabere.
Usoro ihe omuma m³ / h 25 40 50 75
Igwekota .Kpụrụ NXU 500 JS750 NXU 2000 NXU 1500
Ike ịkwọ （kW） Ogbe 18.5 30 2X18.5 2X30
Ighapu ikike （L） 500 750 1000 1500
Max.g nchịkọta nchịkọta （ajịrịja nkume / obere okwute mm） ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Bingba mmiri ọkụ Mpịakọta m³ 4X4 4X4 4X4 4X4
Ndoli moto ike （kW） 5.5 7.5 Ogbe 18.5 22
Ọnọdụ ịdị arọ na izi ezi Nchịkọta kg 1500 ± 2% 1500 ± 2% 2000 ± 2% 3000 ± 2%
Ciment n'arọ 300 ± 1% 400 ± 1% 500 ± 1% 800 ± 1%
Mmiri n'arọ 150 ± 1% 200 ± 1% 200 ± 1% 300 ± 1%
Mmako n'arọ 20 ± 1% 20 ± 1% 20 ± 1% 30 ± 1%
Gbapu elu m 3.8 3.8 4.1 4.1
Ike niile m 40 49 74 101
Nke gara aga: ntọala free ihe batching osisi
Osote: Mobile ihe batching osisi
Auto Concrete batching osisi
Automatic Central Concrete batch osisi
Automatic kọmpat Concrete batching Plant
Automatic Concrete batch inggwakọta Plant N'ihi Sale
Automatic Concrete batch Plant Factory
Automatic Concrete batching osisi n'ihi na ire
Automatic Concrete batching osisi Germany
Ciment Concrete batching Plant
Cement Concrete batching Plant nkọwapụta
Ọnụahịa Ihe Osisi Ihe Nkịtị
Njirimara 1.Mmetụta nzukọ na disassembly, agagharị dị elu nke mgbanwe, adaba na ngwa ngwa, na ọrụ zuru oke mmeghari saịtị. 2. kọmpat na ezi uche Ọdịdị, elu modularity imewe; 3. Ọrụ ahụ doro anya ma arụmọrụ ahụ kwụsiri ike. 4.Less ala, arụpụtaghị ihe; 5.The eletriki usoro na gas usoro na-onwem na elu-ọgwụgwụ na elu pụrụ ịdabere. The mobile ihe inggwakọta osisi bụ ihe mmepụta kwadebe ...
Tdị ụdị batching osisi
Njirimara Osisi ahụ nwere usoro batching, usoro nha, usoro agwakọta, sistemụ njikwa ọkụ, sistemụ njikwa ikuku na wdg. Mkpokọta, ntụ ntụ, mmịba mmiri na mmiri nwere ike ibupụta ma jikọta ya na osisi. Ejiri agwakọta agwakọta agwakọta binyere site na onye na-ebu ibu n'ihu. A na-ebufe ntụ ntụ site na silo n'ime ntule site na ịghaga ebu .Water na mmiri mmiri mmako na-pumped si akpịrịkpa. All na-erikpu usoro bụ ...
ntọala free ihe batching osisi
Njirimara 1. Ntọala enweghị ntọala, enwere ike itinye akụrụngwa maka nrụpụta mgbe arụchara ọrụ ọrụ ma sie ike. Ọ bụghị naanị belata ụgwọ ntọala ntọala, kamakwa belata usoro nrụnye. Ihe eji eme ihe di iche iche nke ngwa ahia na eme ka odi ngwa ngwa ma wepu ya. 3. N'ozuzu kọmpat usoro, obere ala na-arụ. Nkọwapụta Ọnọdụ SjHZN0 ...
Ikwu ndoli ihe batching osisi
Njirimara Osisi a nwere sistemụ batching, sistemụ na-eri nri, sistemụ ngwakọta, sistemụ njikwa latriki, sistemụ ikuku pneumatic yana wdg. Nchịkọta atọ, otu ntụ ntụ, otu mmiri mmiri na mmiri nwere ike ibupụta ma jikọta ya na osisi. Ejiri agwakọta agwakọta agwakọta binyere site na onye na-ebu ibu n'ihu. A na-ebufe ntụ ntụ site na silo n'ime ntule site na ịghaga ebu .Water na mmiri mmiri mmako na-pumped si akpịrịkpa. Ndi nile weighi ...
Water n'elu ikpo okwu ihe batching osisi
Njirimara 1.Ọ dabara adaba maka imepụta mmiri mmiri, yana usoro pụrụ iche na-emezu ihe mmiri chọrọ. 2.Compact Ọdịdị nwere ike belata mwube na-eri nke n'elu ikpo okwu. Ngwaọrụ ahụ nwere nchekwa dị elu ma nwee ike imeghari na ntọala ntọala ikpo okwu yana mmetụta nke ajọ ifufe. 4.Equipped na nnukwu olu nchịkọta bins, otu oge nri nwere ike izute mmepụta nke 500m3 nke ihe (nwere ike ahaziri ...
High-ọsọ ụgbọ okporo ígwè raara onwe ya nye batching ...
Njirimara 1.Modular design, adaba iji zukọta ma gbasasịa, mbufe ngwa ngwa, nhazi mgbanwe; 2.Adopting elu-arụmọrụ igwekota, elu mmepụta arụmọrụ, na-akwado multiple ụdị fo nri technology, adabara dị iche iche ihe inggwakọta mkpa, na lining mbadamba na UM UBARA ịmụta alloy eyi na-eguzogide ihe onwunwe, na ogologo ọrụ ndụ. 3.The ngụkọta ngụkọta usoro enweta elu-nkenke mmesho nke nchịkọta site na optimizing na d ...